एसरको नयाँ ल्यापटप CES मा: स्विफ्ट,, नाइट्रो and र नयाँ Chromebook | ग्याजेट समाचार
एसरको नयाँ ल्यापटप CES मा: स्विफ्ट 7, नाइट्रो and र नयाँ Chromebook
CES 2018 एक मजबूत सुरू गर्न बन्द छ। धेरै मुख्य ब्रान्डहरू उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्सको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टेक्नोलोजी मेलाहरू मध्ये एकमा पहिले नै अवस्थित छन्। LG ले यसको प्रस्तुत गर्‍यो 4K प्रोजेक्टर र ताइवान एसरसँग त्यस्तै छ सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूका लागि यसको नविकरण ल्यापटप प्रस्तुत गर्दै.
एसरले लास भेगासमा प्रदर्शन गरेको नवीनताहरू मध्ये हामी तीनवटा मोडेलहरू भेट्टाउँदछौं। Acer Swift7(अल्ट्राकबुक), Acer Nitro5(गेमरहरूको लागि) र Acer Chromebook 11 (शिक्षाको क्षेत्रको लागि मोडेल वा गतिशीलतामा प्रयोगकर्ताहरू)। तर आउनुहोस् हामी प्रत्येकले हाम्रो लागि स्टोर गरीरहेका छौं।
1 एसर स्विफ्ट,, एकीकृत LTE जडानको साथ धेरै पातलो अल्ट्राबुक
2 एसर नाइट्रो 5, सबै भन्दा गेमरहरूको लागि नयाँ विकल्प
3 एसर क्रोमबुक ११, गुगलको डेस्कटप अपरेटिंग सिस्टममा अधिक दांव
एसर स्विफ्ट,, एकीकृत LTE जडानको साथ धेरै पातलो अल्ट्राबुक
हामीले तपाईंलाई देखाउन चाहेको मोडेलहरूमध्ये पहिलो यही मोडेल हो जुन यस सिजनका लागि पुन: नविकरण गरिएको छ। Acer स्विफ्ट already पहिले नै CES को अन्तिम संस्करण को एक सितारा थियो। र यस वर्ष यो पर्दा आकार मा बढ्छ; LTE जडान जोड्नुहोस् र सजिलो यातायातको लागि पातलो बनाइएको छ।
यो Acer स्विफ्ट7मा आउँछ १०.१ इन्च स्क्रीन - अघिल्लो संस्करण १.13,3..8,98 इन्च — थियो, सानो फ्रेम, आईपीएस टेक्नोलोजी र पूर्ण HD अधिकतम रिजोलुसनको साथ। साथै, हामीले तपाईलाई भनेजस्तै यो मोडल एकदम पातलो छ, 10..XNUMX mill मिलिमिटरको अधिकतम मोटाई हासिल गर्दछ र सब भन्दा राम्रो: यसको ब्याट्री १० घण्टा काममा चलेको छ, कम्पनीले आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति अनुसार।
अर्कोतर्फ, यो Acer स्विफ्ट विन्डोज १० मा आधारित छ; तपाईको प्रोसेसर हो 7th औं जनरल इंटेल कोर आई and र एक एसएसडीमा GB जीबी र्याम र २8 जीबी भण्डारण ठाउँ लिन सक्दछ। यो मोडेल स्पेनमा अर्को अप्रिलमा देखि एक मूल्य मा उपलब्ध हुनेछ 1.699 यूरो.
एसर नाइट्रो 5, सबै भन्दा गेमरहरूको लागि नयाँ विकल्प
यस अवस्थामा हामी ल्यापटपको सामना गरिरहेका छौं जुन क्षणको सबैभन्दा पातलो हुने बहाना गर्दैन; यसको अभिप्राय भिडियो गेमहरू मन पराउनेहरूको लागि मोबाइल समाधान हो। यो Acer नाइट्रो5एक ल्यापटप हो कि एक धेरै अधिक मानक मापन छ: १ HD..15,6 इन्च पूर्ण HD रेजोलुसन र IPS टेक्नोलोजीको साथ.
यस बीचमा, यस मामलामा, Acer ले इंटेल प्रोसेसरको लागि रोजेको छैन, बरु एएमडीको लागि। अधिक विशिष्ट हुन, तिनीहरू Ryzen प्लेटफर्म मा एक ग्राफिक्स कार्ड संग शर्त AMD Radeon RX560। यस अवस्थामा पनि र्याम मेमोरी 32२ जीबी सम्म पुग्न सक्दछ। जबकि फाईलहरू बचत गर्ने ठाउँ एसएसडी ढाँचामा 512१२ जीबी छ।
एसर नाइट्रो सँग पनि यस प्रकारको नोटबुकको लागि धेरै विशिष्ट डिजाइन छ: तिनीहरू पातलो हुँदैनन्, तर तिनीहरूको चेसिस उल्लेखनीय छ। थप रूपमा, एक पटक खोलिए पछि हामी फेला पारेका छौं एक ब्याकलिट किबोर्ड कि प्रयोगकर्ताले तिनीहरूको मनपर्ने अनुकूलन गर्न सक्दछ। कि त अनुकूलन प्रकार्य कुञ्जीहरू बारे नबिर्सनुहोस्। यस बीच, कनेक्शन सेक्सनमा हामीसँग USB-C, HDMI, Gigabit ईथरनेट पोर्टहरू र "Dolby अडियो प्रीमियम" र "Acer TrueHarmon" अडियो टेक्नोलोजी हुनेछ। यस मोडेलको मूल्यबाट सुरू हुनेछ १,०। ० यूरो र अप्रिल देखि उपलब्ध हुनेछ.
एसर क्रोमबुक ११, गुगलको डेस्कटप अपरेटिंग सिस्टममा अधिक दांव
जबकि नयाँ प्लेटफर्मको बारेमा अधिक जानकारीहरू परिचित छन् फुच्सिया, कम्पनीहरूले नयाँ कम्प्युटरहरूमा शर्त राख्न जारी राख्यो जसमा क्रोम ओएस स्थापना भएको छ जुन बारीमा छ एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरूसँग उपयुक्त। पछिले उनीहरूलाई घर, विद्यालय वा मोबाइल कामदारहरूको लागि पनि धेरै शक्तिशाली विकल्प बनाएको छ।
El Acer Chromebook 11 ले ११..11,6 इन्च स्क्रिन सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ। यसको HD रिजोलुसन (१,1.366 x x 768 p पिक्सेल)। र एक किलोग्रामको वजन प्राप्त गर्नुहोस्; अर्को शब्दहरु मा, एक दिन वास्तवमा चाखलाग्दो पोशाक। साथै, ChromeOS लाई धन्यवाद, यो क्रोमबुक एक ल्यापटप हो जुन चाँडै सक्रिय र बन्द हुन्छ। अवश्य पनि, तपाईलाई सँधै इन्टरनेट जडान चाहिन्छ। यद्यपि यो, हामी हालै रमाईलो फ्लैट दरहरूको साथ, यो कुनै समस्या हुनेछैन।
अन्त्यमा, ब्याट्री जसले यस Acer Chromebook लाई सुसज्जित गर्दछ १ 10 घण्टा सम्मको स्वायत्तता निरन्तर के यस प्रकारको नोटबुकमा वास्तवमै उल्लेखनीय कुरा भनेको मूल्य हो। यो कम्प्युटर मार्चको महीनामाको मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ 249 यूरो.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » एसरको नयाँ ल्यापटप CES मा: स्विफ्ट 7, नाइट्रो and र नयाँ Chromebook
LG ले रोल गर्न योग्य 65 XNUMX इन्च OLED टिभी प्रस्तुत गर्दछ
जाँच गर्नुहोस् कि यदि तपाईंको प्रोसेसर यस सूचीमा स्प्याक्टर र मेल्टडाउनबाट प्रभावित छ